कर्णालीमा कोरोना संक्रमित दुई चिकित्सक निको भए- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कर्णालीमा कोरोना संक्रमित दुई चिकित्सक निको भए
सुर्खेत — कोरोना संक्रमण देखिएका कर्णाली प्रदेश अस्पतालका दुई चिकित्सक कोरोनामुक्त भएर आइतबार डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना विशेष अस्पतालको ‘फोकल पर्सन’समेत रहेका वरिष्ठ चिकित्सकसहित अर्का एक चिकित्सकमा असार ११ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
चिकित्सकसहितको टोलीलाई अस्पतालको निवासक्षेत्रमा रहेको आइसोलेसनमा राखिएको थियो । पुनः स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आइसोलेनबाट बाहिर निस्किएको ती चिकित्सकले बताए । ‘हामी दुवै जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएका छौं, कोरोनाको कुनै लक्षण पनि छैन,’ उनले भने, ‘अब करिब एक हप्तामा ड्युटीमा फर्किन्छौं होला ।’
कर्णालीमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलका अनुसार शनिबारसम्म संक्रमित १ हजार ४ सय ८९ मध्ये १ हजार २ सय १ जना डिस्चार्ज भएका छन् । अहिले २ सय ८२ जना प्रदेशका विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका र संक्रमितमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले बताए ।
प्रकाशित : असार २१, २०७७ १२:२७
नेपालगन्ज — बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको पाटे बाघ मारेर तस्करी गर्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट बाघको साढे १० किलो हड्डीसमेत बरामद भएको छ ।
५ न. प्रदेश ब्युरो दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको संयुक्त टोलीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ सिमलघारीका नरबहादुर घर्तीमगरलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनले आफ्नै घरको मकै बारीमा बाघको छाला र हड्डी लुकाएर राखेका थिए । उनलाई उक्त छाला प्रकाश आचार्य र नरे घर्तीले दिएको खुल्न आएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम रानाका अनुसार उक्त छाला बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघको भएको पत्ता लागेको छ । बाघ निकुञ्जबाट सामुदायिक वनमा गएका बेला मारिएको प्रहरीको अनुमान छ । बाँके निकुञ्जमा २१ पाटे बाघ रहेको निकुन्जले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार २१, २०७७ १२:१६